विजया दशमीमा टीकाको साइत १० बजेर दुई मिनेटमा - SudurSanchar
शनिबार, मङि्सर ११, २०७८
शुक्रबार, असोज २९, २०७८
काठमाडौँ– नेपाल पञ्चांग निर्णायक समितिले बडादसैंको टीकाको साइत २९ असोज बिहान १० बजेर २ मिनटमा उत्तम ठहर गरेको छ ।
शुक्रबारको उक्त समयदेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म टीका, जमरा लगाउन सकिने समितिले जनाएको छ ।
समितिका अनुसार शुक्रबार आठ बजेर १९ मिनटमा घटस्थापनादेखि पूजा गर्न थालिएकी देवीलाई विर्सजन गर्ने साइत छ । त्यस्तै हिन्दुहरूको महान पर्व दशै नेपालमा मात्र नभएर अन्य केही देशमा पनि मनाइन्छ । हिन्दुहरुको बाहुल्यता भएका समुदायले नवरात्रीसम्म विभिन्न शक्ति पीठमा पूजा गर्छन् । छिमेकी मुलुक भारतका विभिन्न राज्यमा फरक फरक ढंगले दशै मनाइन्छ ।
भारतमा विशेषगरि नवदुर्गाको पुजा गरिन्छ । सिक्किम, दार्जलिङलगायतका नेपालभाषीको बाहुल्यता रहेको क्षेत्रमा टिका लगाइन्छ । भारतबाहेक वंगलादेश बर्मा, थाइलेन्ड, भुटान, श्रीलंका र मलेसियामा पनि दसैं मनाइन्छ । मनाउने शैलीे फरक भए पनि अधिकांशले नवदुर्गाको पुजा आरधना गर्छन् ।
पश्चिम बंगालमा नवदुर्गा पूजाको आरधना गरेर मनाइन्छ । बंगालमा षष्ठीदेखि पाँच दिनसम्म यो पर्व मनाइन्छ । सप्तमी, अष्टमी र नवमीमा दुर्गाको पूजा हुन्छ ।
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु र कर्नाटकमा दश दिनसम्म दसै मनाइन्छ । लक्ष्मी, सरस्वती र दुर्गाको पूजा गरिन्छ । पहिला तीन दिन धन र समृद्धिकी देवी लक्ष्मीको आरधना गरिन्छ भने दोस्रो तीन दिन विद्याकी देवी सरस्वतीको पुजा गरिन्छ र अन्तिम दिन शक्तिकी देवी दुर्गाको पुजा गरिन्छ ।
गुजरातमा दसैको अवसरमा गरबा नृत्य गरिन्छ । त्यस्तै, महाराष्ट्रमा देवीको पुजा आराधना गरेर मनाइन्छ । कश्मीरका अल्पसंख्यक हिन्दूले नवरात्रि मनाउँछन् । परिवारका सबै वयस्क नौ दिनसम्म उपवास बस्छन् । भक्तजनरू नवरात्रीभर माता भवानीको दर्शन गर्छन् । नवरात्रीमा तालको बीचमा रहेको एउटा माता भवानीको मन्दिरमा दर्शन गर्न जानेको भीड उल्लेख्य हुन्छ ।
करिब १ लाख नेपालभाषी रहेको बर्मामा पनि दसै मनाइन्छ । नेपालभाषीको बाहुल्यता रहेको पूर्वराजधानी सहर यांगुन, मन्डला पिन यु एलवीन, मोगोक, तमु, कलामयो, ताउनगीमा दसैं मनाइन्छ ।
वर्मापछि वंगलादेशमा पनि दसैं मनाइन्छ । १६ करोड जनसंख्या भएको वंगलादेशमा १४ प्रतिशत हिन्दु धर्मालम्बी छन् । हिन्दु धर्मालम्बीले नवदुर्गाको पुजा आरधना गर्छन् । वंगलादेश बस्ने नेपालीबाहेक अन्यले भने टिका लगाउँदैनन् ।
त्यस्तै बौद्ध धर्मालम्बीहरूको बाहुल्यता रहेको श्रीलंकामा पनि हिन्दुहरूले दसैं मनाउँछन् । त्यसैगरी मलेसिया, थाइलेन्ड इन्डोनेसियाका हिन्दुहरुले मनाउँछन् ।एजेन्सी
अनितालाई भेन्टिलेटरमा राखियो ,भगवान् भरोसा,बिनोद यसरी पुगे (हेर्नुस् भिडियो )
रु दै रु दै सकियो महान श्रीमान र अनिताको भाईटिका तिहार,दिदिले बुहारीलाई रुदै टीका लगाइदिए (भिडियो हेर्नुस्)
हेर्नुस् ३ महिनाको बच्चा बिकेर घाँस दाउर गर्दै छिन १८ वर्षकि यी युवती (भिडियो हेर्नुस्)
दुई खुट्टा छैनन् तर छोरिलाई ढाडमा बोकेर काम गर्ने जुनाको यस्तो बन्यो नया घर ,यति धेरै खुसि (हेर्नुस् भिडियो )
नत आँखा नत आफन्त , बुढेसकालमा कोहि छैन सहारा ,एक्लै भोकभोकै ,कठै (हेर्नुस् भिडियो )
चोकतिर केटा हो, चोकतिर’ भनेर भाइरल भएका मानबहादुरले के गर्छन्
माया मारेर पछि समिक्षा अधिकारी र नरेश खातीले १ बर्ष पछि फेरी ल्याए नया गीत’हाम फालम कि'(भिडियो) November 25, 2021
माया मारेर पछि समिक्षा अधिकारी र नरेश खातीले १ बर्ष पछि फेरी ल्याए नया गीत’हाम फालम कि'(भिडियो) November 19, 2021
अनितालाई भेन्टिलेटरमा राखियो ,भगवान् भरोसा,बिनोद यसरी पुगे (हेर्नुस् भिडियो ) November 19, 2021
बर्षौंपछि लोकप्रिय गायक कुलेन्द्र बिश्वकर्मा र मोडल रन्जिता गुरुङ एकै गीतमा, यस्तो बन्यो भिडियो November 19, 2021
हेर्नुस् ! मृगौला यसरी फेरेर फर्किएकी छिन् चम्सुरी मेरी बास्सैमा,छायांकनमा पुग्दा सबैजना भा’वुक भए (भिडियो हेर्नुस्) November 19, 2021
आहा ! बिनिता र सचिनको पहिलो भेट बल्ल भयो,यसरी गीत गाएर यति धेरै रमाइलो गरे (भिडियो हेर्नुस्) November 19, 2021
स्कुल ड्रेसमा नाचेर टिकटकमा भाईरल दाजु-भाई मिडियामा । ३ बाउछोरा नै नाच्छन्, बुवा भन्दा कसैले पत्याएन (भिडियो हेर्नुस) November 19, 2021
भाईरल गायिका काजल जोशीको घरमा पहिलोपटक इन्द्रेणी पुग्दा यतिसम्म रमाईलो भयो (हेनुहोस् भिडियोसहित) November 19, 2021
‘कति बस्छेउ माइतिकै कौसीमा’ गीत नयाँ भर्सनमा सार्वजनिक , दिपाश्रीलाई माग्नेबुढाले भगाए ! (भिडियो) November 19, 2021
बुढो बनेर शिशिर भण्डारीले प्रतिक्षा काफ्लेसँग रोमान्स गरे, नयाँ गीत ‘बुँगो’को भिडियो आयो (भिडियो सहित) November 19, 2021